Samachar Batika || News from Nepal » कुन बार के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? थाहा पाउनुहोस ।
कुन बार के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? थाहा पाउनुहोस ।
दैनिक जीवनमा हामीले कैयौं सं’र्घष गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा केही सफलता त केही असफलता मिल्छ । तर जे काम गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार ग्रह दो’ष नि’वारण गर्नुपर्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
साताको दोश्रो दिन सोमबारको शुरुवात ऐनामा हेरेर मात्र यात्रा गर्नु शुभ मानिन्छ । सोमबार उठ्नासाथ आफुलाई ऐनामा हेर्नुहोस् । यसले तपाईको काममा सफलता दिलाउने गर्दछ । तर स्मरण रहोस् ऐना च’र्केको वा फु’टेको हुनुहुँदैन ।
हामीले कैयौं सं’र्घष गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा केही सफलता त केही असफलता मिल्छ । तर जे काम गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार ग्रह दो’ष नि’वारण गर्नुपर्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् ।यसरी लगातार असफलता हात लागेमा केही उपायहरु अपनाउँदा सफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ । बार अनुसार माथी जानकारी दिएअनुसार उपाय अपनाउनुभयो भने शुभ हुनेछ ।
प्रकाशित मिति ५ चैत्र २०७६, बुधबार ०१:४५